Bindu uye maruva eimba - Oleander kana Zocum Art sens - mazano eimba nebindu
Bindu uye maruva eimba - Oleander kana Zocum
19.03.2019 Yakatumirwa na: Art Sense
Iro bindu, Maruva ebindu, Pfungwa Pamba, Zvirimwa, Maruva eimba, Matipi
Oleander kana Zerkum (Nerium oleander) rudzi rwakapararira rwebindu uye maruva emukati emhuri yeOleander / Toyn (Apocynaceae). Zvekutanga zvisina kuburitswa, uyu muti unogara uchigara kana muti mudiki unowanikwa kubva kuSoutheast Asia kuenda kuNorth Africa. Pasinei neyakatangira, zvakadaro, chinhu chimwe chinofanira kuzivikanwa shuwa - ese mativi acho ane chepfu uye, kunyangwe achibatsira pakurapa, anogona kuve nenjodzi kuvanhu uye mhuka dzinovaraidza. Uku ndiko kumwe kwehunyanzvi hwezita rake (kubva muchiGiriki ὀλλύω uye ἀνήρ, ἀνδρός - "Ini ndakarwadzisa / kuuraya vanhu"), uye imwe yacho ndeyekufanana kwekuwona, kunyangwe ivo vasina chekuita nemuti wemuorivhi (Olea europea). Iyo zoom inokura pane yakananga stems inonyungudika nekufamba kwenguva. Inosvika pakukwirira kwemamita e6 nemashizha ayo, akajeka girini pakutanga, voita rima, elliptical uye elongated, inokura mumaviri kana matatu. Anomiririra monotypic genus, Oleander ine mhando dzakasiyana-siyana, ine mavara akasiyana kubva kune echando chena, yero, kirimu uye rakapinki rakacheneruka kune rakadzika dzvuku.
Zvakanyanya nyore kutarisisa uye pasina zvakakomba zvido zvekushisa uye humidity, chirimwa chinoda kutarisirwa kushoma kuti unakirwe nemavara ayo akanaka.
Zocum yakakura fan yekupenya kwezuva uye izvi, pamwe chete nekushisa pamusoro pe18 madhigirii nemvura yakawanda, zvinoita kuti chirimwa chiwedzere kunaka. Kana zvisina kudaro, inogona kumira kupisa kusvika -10 madhigirii, inoshongedza kumanyoro akadzika uye akasiyana mamiriro.
Kunyange zvakadaro, kubva muchirimo kusvika muchando, kudiridza kwakanaka kunodiwa, uye panguva yekudziya kwemwedzi, kunyangwe mvura yekuchengetedza (isina kukwana runoff) inogamuchirwa yeruva. Izvo zvinodikanwa kuunza zoom kunze kune pachena. Nekudaro, kana ichichengeterwa munzvimbo isiri yezuva mukati memwedzi yechando, shanduko yekutungamira kupisa inofanirwa kuve zvishoma nezvishoma. Munguva yemwedzi yezhizha uye tembiricha yakakomberedza 30 madhigirii, oleander ichanzwa zvakanaka. Izvo zvakanaka zvekupfumira kwemanyowa pamwe nemaminerari uye organic compositions, pamwe nekupfira nguva. Kupiwa saizi inogona kukura yekukura, gore rega rega kutemesa kwe oleander kunodiwa.
Inotakurwa nembeu uye akachekwa, asi sembeu dzinokurumidza kutadza kugona kumera, dzinofanira kudyarwa nekukurumidza sezvinobvira mushure mekuumbwa - pasi pegirazi uye panguva yekudziya pamusoro pe33 madhigiri kusvika kumera. Nekudaro, nzira yembeu yekusimudzira haibvumire kuti maitiro akasiya-siyana achengetedzwe.
evergreen houseplants, maruva ebindu, kubm, nzira yekutarisa iyo zoom, oleander, maruva ane muchetura, maruva eimba, emukati maruva ari nyore kukura, maruva, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Piramidhi yemaruva emaruva
Runako rwezvisikwa runofema, asi hupenyu hwekukurumidza uye hwehupenyu hwesimba huri kufamba hunowanda ...
Kudya kwemangwanani "Daisies"
Pfungwa yepakutanga nehunyanzvi hwekudya kwakasarudzika yakamisikidzwa daisy. Kushamiswa ...
Akavezwa matafura ebindu
Maarches ane maruva akanaka, emaruva echisikigo mubindu rezhizha ane hunyanzvi hwekushongedza ...
Katakiti anokanganikwa, kune vazhinji vevanhu, nzira yekufambisa, asi anoyeuchidza ...
Maruva eimba - Crosandra
Crosandra imhando yeruva inoyerera gore rese uye yakanaka kwazvo semi-shrub iyo yakura zvakare ...
Maruva eimba - Brunfelsia
Brunfelsia (pachinzvimbo cheGerman botanist Otto Brunfels) igirazi rinogara ...